Ifulethi elivulekile neligqamile endaweni engcono kakhulu yase-Tigre - I-Airbnb
Ifulethi elivulekile neligqamile endaweni engcono kakhulu yase-Tigre
Ifulethi elihle nesimanje elinamakamelo okulala angu-2 esakhiweni esisha, esitholakala amamitha angu-200 ukusuka esiteshini sesitimela, amamitha angu-300 ukusuka esiteshini somfula namamitha angu- ukusuka kokubili e-Del Río nase-Paseo Victorica. Itholakala eduze ne-Pan American Highway. Inokuqapha kwasebusuku, igaraji layo, igaraji lamahhala, igumbi lokuhlanza izingubo lomphakathi kanye nengadi ephakathi. Imishini engu-2 AC, i-WiFi, i-smart TV, i-radiator yokushisisa kanye nokuhlobisa kwe-avant-garde. Ihlonyiswe ngokugcwele futhi ikulungele ukuba ujabulele ukuhlala kwakho.
Iyunithi yesimanje nekhanyayo iza nakho konke okudingayo ukuze wenze ukuhlala kwakho kube okuhlukile futhi akudingeki ukhathazeke nganoma yini. Amathawula, amashidi, izinsipho, i-shampoo, umshini wekhofi onamakhebhuli, i-balcony enkulu, i-smart TV, njll. Isakhiwo sineminyaka engu-3 kuphela ubudala futhi ifulethi libukeka lisha. Yonke imininingwane yokuhlobisa yenzelwe ukudlulisela umoya okhululekile futhi omuhle.
Ifulethi litholakala nje emigwaqweni engu-2 ukusuka e-Tigre Station futhi liqhele ngezakhiwo ezingu-2 kusukela ekuqaleni kwe-Av. Ubieto (Camino de las Banderas)
Ngaphezu kweTreyini, imigqa eminingi yamabhasi idlula kude ngamamitha angu-200 ukuze ezokuthutha zingabi yinkinga. Sihamba imizuzu embalwa ukusuka ehholo ledolobha, itheku lezithelo nepaki lasogwini.
Uma kwenzeka noma yikuphi okwenzekayo, sinikeza ukwesekwa kwamahora angu-24.